Sabuuradda cad ee Interactive ee waxbarashada iyo ganacsiga
Sabuuradda cad ee Interactive ee waxbarashada iyo ganacsiga
Qalab waxbarasho oo fudud, waara, awood leh, oo la awoodi karo.Dhammaan hawlaha guddiga taabashada waxaa lagu samayn karaa taabashada farta ama dhaqdhaqaaqa dusha sare ee looxa iyo labada furayaasha kulul ee fudud ayaa fududeynaya qalliinka.
Dusha sare ee looxa waxa ay la socotaa xudunta nano dahaarka leh oo leh jir dhuuban si looga faa'iidaysto cabbirka saadaasha.
Whiteboard-ka Interactive waxa uu isticmaalayaa tignoolajiyada taabashada infrared horumarsan oo leh saxnaan taabasho sare leh.Waxay u ogolaataa isticmaalaha inuu isticmaalo far ama wax kasta oo mugdi ah inuu sawiro oo wax ku qoro qiimo jaban, qalin gaar ah looma baahna.Iyada oo ilaa 10 dhibcood oo badan taabasho isdhexgalka, isticmaalayaasha badan ayaa isku mar wax qori kara.
10 Dhibic Taabasho
U shaqaynta iyo u ciyaarista koox ahaan.
Farsamada Ir Touch
Interface taabasho jawaab celin leh oo waarta.
Software-ka la isku daray
Software-ka oo aan lahayn kharashyo shati.
Jidadka gaagaaban ee fudud ee xawaaraha is dhexgalka.
Iyada oo bilaash ah saxaarad qalin oo caqli badan
Taxanaha QWB300-Z waxa uu la socdaa saxaaradda qalinka ee QPT100 ee dhawaan la sameeyay.Mid ergonomic ah, si sahlan loo maareeyo palette farahaaga, si buuxda u barnaamijsan kara oo leh xulashooyin midabyo badan.
Saxaarada qalinka ee casriga ah waxa ka mid ahaa 4 midab oo qalin ah: Madow, casaan, cagaar iyo buluug, hal masax iyo hal tilmaame.Waxa lagu xidhay sabuuradda cad oo lagu xidhay fiilo gaar ah oo ay bixisay Qomo.
La imow waxbarashada bilaashka ah software-Flow!Wuxuu shaqeeyaa pro
Software-ku waa ay fududahay in la isticmaalo marka aad diyaarinayso ama bixinayso casharro maaddooyin kala duwan ah.Waxay leedahay wax badan oo cusub
sifooyin iyo agab si ay u fududeeyaan baridda maaddo kasta, madadaalo badan iyo dhiirigelin dheeraad ah ardayda iyo macallimiinta.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee software-ka
Socodka!Software-ka Works pro wuxuu leeyahay kumanaan agab waxbarid ah.Dhanka kale, waxaad ku dari kartaa kheyraadkaaga sida sawirka / maqalka / fiidiyowga ee softwared oo aad u badbaadiso kheyraad shakhsi ahaaneed.
Walxaha ku yaal mareegaha waxaa lagu dhejin karaa sabuuradda sawirka si loogu isticmaalo bandhigga.Inta lagu guda jiro raadinta website-ka, waxaad dooran kartaa shayga la doonayo (sawiro ama qoraal) oo u jiid dusha sare ee sawirka.Tani waxay caawimo weyn u tahay ardayda inay si fudud u ogaadaan casharrada.
Cabirka kala duwan ee doorashadaada
Waxaad dooran kartaa cabbirka 83"/93"/102" sabuur cad oo is-dhexgal leh oo leh saamiyo kala duwan si aad ula kulanto codsigaaga deegaanka.
Xiga: Farta Barashada Dugsiga Taabo Guddiga Isdhexgalka
Hore: QWB300-Z sabuurad cad is dhexgal
Sabuuradda cad ee Interactive China
Sabuuradda cad ee Infrared
Qaybiyaha sabuuradda cad ee Interactive
Sabuuradda cad ee Interactive Smart
Taabo sabuuradda cad
Qomo QWB300-Z WHITEBOARD Faahfaahin degdeg ah
QWB300-Z Xogta Farsamo ee Sabuuradda cad
Qalinka Indheergaradka ah ee QPT100 Buugga Isticmaalaha
QOMO IR sabuuradda cad ee QWB300-Z
QWB300-Z Buug-yaraha Boodhka Cad ee Elektarooniga ah ee Dhex-dhexaadka ah
Qiimaha hoose ee Shiinaha Mini Security Camera, Covert...
Naqshad la cusboonaysiin karo oo loogu talagalay Dukumeentiga Shiinaha ee Sawirka Sol...
Dhammaan kuwa ku jira One Touch Screen LCD waxay soo bandhigayaan 65 ″ ...
Habka Codaynta Doorashada Qomo oo leh cod-gudbiyayaal...
IOS Shahaadada Shiinaha Foska Iibka Kulul oo aan Khamri lahayn...
Imaanshaha Cusub ee Shiinaha Shiinaha 65 Inch Smart HD School...